Te handràra ny rune Norse 'Nazi' ny governemanta soedoà ary mankahala ny hevitra adaladala ny soedoà
Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » Te handràra ny rune Norse 'Nazi' ny governemanta soedoà ary mankahala ny hevitra adaladala ny soedoà
Ny governemanta soedoà dia mijery ny mety handrarana ny fampiasana ny rune Norse, hoy ny fampitam-baovao avy any an-toerana, ao anatin'ny fanahiana ny amin'ny fanodikodinanan'ny vondrona neo-Nazi ireo marika taloha.
Ny minisitry ny fitsarana Morgan Johansson dia manadihady amin'izao fotoana izao raha tokony ho voarara any Sweden ny rune na tsia ho fomba iray hanakanana ireo vondrona mpankahala, hoy ny tranonkala iray any Suède Samhällsnytt. Antenaina hanome sosokevitra momba izany ny tenany amin'ny faran'ny volana Mey.
Raha manapa-kevitra ny handroso i Johannsson miaraka amin'ny lalàna mandrara ny rune, mety ho tafiditra ao amin'ilay fandrarana ny marika Norse, sary ary firavaka nentim-paharazana.
Nahatezitra ny soedoà maro ny sosokevitra, izay mahita ny Norse rune ho anisan'ny tantaram-piainan'izy ireo. Ho an'ireo izay miantso ho mpanompo sampy na mpanompo sampy, ny fandrarana mety hatao dia nadika ho fanafihana ny fahalalahana ara-pinoana, izay antoky ny lalàm-panorenana soedoà. Ny Nordic Asa-Community, antokom-pinoana mpanompo sampy lehibe indrindra any Suède, dia nanohitra ny ezaka nataon'ny governemanta tamin'ny lova taloha tany amin'ny polisy tany Sweden, ary nilaza fa “ny fitsarana an-tendrony sy ny tsy fifankahazoan-kevitra dia sitrana amin'ny fahalalana sy ny zava-misy.
Nampitandrina ny fikambanana ara-pivavahana fa ny fandrarana ny Norse rune any Suède dia "hamafa ny ampahan'ny tantarany, ny kolontsainy ary ny finoantsika ary ny fahalalahantsika maneho hevitra."
Ny parlemantera teo aloha ary mpikambana ao amin'ny Demokraty soedoà ankavanana, Jeff Ahl, dia naneho ny fanamavoana azy tamin'ny hevitra momba ny fandrarana toy izany.
“Miaro ny kolontsaina marolafy ny governemanta fa tsy tokony hanana ny kolontsainay manokana. Ny ataon'ny governemanta dia manandrana manivana ny lovantsika ara-kolontsaina manokana ary mampanjavozavo ny fakantsika. Tsanganana fahadimy, ”nisioka izy.
Suède am-polony hafa no nameno ny media sosialy tamin'ny fanehoan-kevitra maneho ny tsy finoana sy ny fanamavoana. Ny mpampiasa Twitter iray aza dia nanamarika fa nanana tatoazy rune maromaro izy, ary nanontany tena tamim-pihomehezana raha toa ka handoa fandidiana laser ny governemanta hanalana ireo sary avy amin'ny vatany.
Nisy fanangonan-tsonia iray manohitra ny fandrarana mety natomboky ny Nordic Asa-Community izay nanana sonia maherin'ny 11,000 tamin'ny Alarobia. Ity vondrona ity koa dia manao fihetsiketsehana ao amin'ny foibe manan-tantara ao Stockholm amin'ny 24 Mey.
Raha ny Alemanina nazia na ny vondrona neo-nazidia ankehitriny dia nampiasa marika Norse ho an'ny sainam-pireneny sy ny regalia azy ireo, ny rune ankehitriny dia matetika no hita amin'ny telefaona maoderina na solo-saina maoderina. runic mitovy amin'ny litera "H" sy "B".
Hanomboka ny vanim-potoana fanokafana any Alaska ny Mpanjakavavy Cunard Elizabeth